ဖက်ရှင်အလှ နေ့စဉ်ဘဝ | Myanmar Academy - Online Education, Learning, Courses, Platform
6 Lessons 00:11:10 Hours
Fashion Beauty And Daily Life
စီစဉ်တစ်ကျ - သင့်ဘီဒိုထဲမှာ ဘာတွေရှိမလဲ? 00:01:03
အဝတ်ဘီဒိုကို ဘယ်အချိန်မှာ ရှင်းထုတ်ရမလဲ? 00:00:59
နွေနဲ့ဆောင်းအတွက် အဝတ်ဘီဒိုကို စီစဉ်ခြင်း 00:01:58
ဘာကြောင့် အဝတ်ဘီဒိုကို ကိုယ်တိုင်ရှင်းသင့်သလဲ? 00:03:33
သင့်မှာရှိတဲ့ အဝတ်တွေကို ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲ? 00:02:03
အကျီချိတ် သစ်သားသုံးမလား ဝါယာကြိုး သုံးမလား? 00:01:34
ဖက်ရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုသူများ
ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် အထက် မည်သူမဆို ဖက်ရှင် အလှ စိတ်ဝင်စားသူများ
ယခုသင်ခန်းစာမှ ရရှိနိုင်မည့် အချက်အလက်များ
သင်၏အကောင်းဆုံးအရောင်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်အားနုပျိုကျန်းမာစေပြီး ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးဖြစ်စေလိမ့်မည်
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စတိုင်ကိုကောင်းမွန်စွာညှိခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သော၊ တည်မြဲသောပုံရိပ်၏အခြေခံဖြစ်စဉ်နှင့်အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။
သင့်အားတောက်ပစေမည့်အရောင်များသည်သင်၏အသားအရေ၊ ဆံပင်နှင့်မျက်လုံးအရောင်ပေါ်အခြေခံသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ရာသီအလိုက်လေ့လာခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးစျေးဝယ်ရန်အရောင်ဇယားဖြင့်သင်၏ရည်ညွှန်းစာအုပ်ကိုကူးယူပါလိမ့်မည်။
ယခုသင်ခန်းစာက သင့်ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားကို ချော့မောစေသောအဝတ်အစားများနှင့် သင့်ပုံကိုမှန်ကန်သော အရောင်များ၊ လိုင်းများ၊ ဖြတ်တောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မှန်ကန်မှု့ ရှိစေရန်
ဒီသင်ခန်းစာကို (ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစတိုင်စမ်းသပ်မှုဖြင့်) ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းထက် ကျော်လွန်၍ သင်၏ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုဖန်တီးပါ။ ကုန်ကျစရိတ်ပိုများသောအမှားများမပြုလုပ်ပါနှင့်၊ သင်တစ်ဦးချင်းနေထိုင်မှုပုံစံ၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့် ဘတ်ဂျက်အရအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် ဝယ်နိုင်ပါသည်။
ယခုသင်ခန်းစာအတွက် ဘယ်သူတွေ သင့်တော်ပါသလဲ
တစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်
00:11:10 Hours On demand videos
Course preview:ဖက်ရှင်အလှ နေ့စဉ်ဘဝ